1. Ubax kuu gaar ah oo xoqan oo bilaa fasax ah.
Sida loo bilaabo dukaan ubax u gaar ah oo laga soo bilaabo xoqida oo aan lahayn rukhsad. (Buugga AA Yelcheninov)
Fikradda ah in la furo dukaan ubax oo u gaar ah ayaa si isdaba joog ah u booqday qof hamiga uu u qabo ubaxbaxeedku uu muddo dheer ku soo kordhay waxqabad xirfad leh jacayl fudud oo ubax ah. Taasi waa waxa aan waligay ku riyoon jiray.
Ku soo noqoshada 90-meeyadii, waxaan go'aansaday inaan bilaabo ganacsi ubax oo waxaan furay dukaankeyga ubax ee uhoreeyay. Fikirku wuxuu ahaa guul, markii dambena wuxuu ku guuleystay inuu guushii ku celiyo bakhaar ku yaal Mareykanka. Wax yar ka dib, waxaan haystay dhowr xarumood oo soo saara dakhli wanaagsan Waxaan u maleynayaa in khibradeyda ku aaddan socodsiinta ganacsi yar oo guuleysta ay dad badan waxtar u yeelan doonto. Boggan internet-ka ah, waxaan ku soo bandhigi doonaa xoogaa sir ah oo ku saabsan sida loo bilaabo dukaankaaga yar ee kuu gaarka ah kaasoo kuu keenaya waxqabadyada aad jeceshahay iyo abaalmarinta lacageed ee shaqadaada.
Sideen ku maareeyay? Marka hore, waxaa jiray rabitaan weyn iyo rumaynta qofka xooggiisa. Marka labaad, jacaylka waxa aan sameeyo. Mar saddexaad, rabitaanka ah in la abuuro hawlo ubax hawleed gaarsiinta ubaxyada iyo iibka darbiyada dukaanka dhexdiisa, rabitaanka ah in la xaqiijiyo fikradahooda hal abuurka ah lana wadaago kuwa kale. Ku adkeysashadayda inaan ka adkaado dhibaatooyinka, harraad u qabo inaan helo waxa aan doonayo, ayaa iga caawisay inaan gaaro guul. Waxaan ku degdegay inaan idinla wadaago waayo aragnimadii ka soo guurista riyada ee aan u furayo ganacsigayga ubax.
Sida hiwaayad kasta oo kale, jacaylka ubaxa waxay u baahan tahay maalgelin lacag ah waxayna qaadataa waqti dheer. Si tartiib tartiib ah, waxay u noqotaa caado, waxqabadyada maalinlaha ah waxay noqdaan kuwo caadi ah, dareenka cusub ayaa lumay. Nidaamkani waa mid lama huraan ah, waxaa hadhsan oo keliya in lala heshiiyo xaaladda. Laakiin wada hadalka kuma saabsana taas.
Si tartiib tartiib ah, xiisaha fudud ee ubaxa ubaxa wuxuu isu rogaa xamaasad dhab ah, soo jiidasho, jaleecid iyo dhuuqid gebi ahaanba iyo raad la'aan. Xubnaha qoysku kama haro hawshan. Sixirka ubaxu wuxuu soo jiitaa qof kasta oo ugu yaraan si uun ugu lug leh hawsha. Kaqeybgalka lama iska ilaalin karo isla markaana xubnaha qoyska oo dhami waxay ku dadaalayaan inay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa sababo guud.
Waxaad ubaahantahay inaad udiyaar garowdo badalida qaab nololeedka. Qof kasta oo go'aansaday inuu furo ganacsi ubax durba wuxuu leeyahay ugu yaraan qibrad yar oo la xiriirta ubax-ubaxa. Si kastaba xaalku ha noqdee, rabitaanka ka ganacsiga ubaxyada kama soo baxayaan meel aan jirin, in kasta oo ay taasi dhici karto. Laakiin xaaladaha badankood tani waa marka laga reebo sharciga. Intaas waxaa sii dheer, waqtiyadii sida fudud ee iibka bouquets loo keenay faa iidooyin aad u badan la soo dhaafay. Suuqa ubaxa casriga ah waxaa ka buuxa badeecooyin kala duwan, laftiisana mar dambe ma keento reyn reyn iyo xiiso aan la malayn karin. Dadka waxaa soo jiita adeegga macaamiisha u janjeedha, qaab shaqsiyeed. Dhamaan qodobadan waa in lagu xisaabtamo, iibkuna si fiican ayaa loo qorsheeyay.
Bogga xiga -> 1.2. Ubax kuu gaar ah oo xoqan oo bilaa fasax ah.
Eustoma (Lisianthus, Japanese rose) - 3 kumbuyuutar.
Dhaqdhaqaaqa - 3 kumbuyuutar.
Orchids - 4 kumbiyuutarada.
Peony wuu kacay - 2 pc.
Bush wuu kacay - 3 pc.
Нежная гамма композиции в деревянном ящике подойдет для подарка близким и коллегам
5400 ₽ Dareenka dareenka
Bush chrysanthemum - 25 kumbiyuutar.
bouquet qurux badan 25 chrysanthemums buufin
Chrysanthemum bush Bacardia 15 kumbiyuutarada Xidhitaanka vip Satin ribbon
5000 ₽ Bouquet №296
Sanduuq ay ku jiraan miraha loo yaqaan 'strawberries', shukulaatada daboolan strawberries iyo buluug
4133 ₽ Bouquet №26
Nooca noocyadu waa nooca sare ee Ecuador, oo ku koray buuraha sare ee Andes, kuna xirnaa xarig satin ah. Waxay fure u noqon doontaa qalbiga gabar kasta.
2900 ₽ Sharafta
Bouquet quruxsan oo ku jira baakadaha jilicsan! Munaasabad kasta)
2590 ₽ 19 soobaxyo leh eucalyptus
Rose - 71 kumbiyuutarada.
Ruscus - 30 kumbiyuutar.
Ubaxyo jilicsan oo ku jira dambiil weel ah waxay u muuqdaan kuwo damaashaad ah. Ubax sii sabab la'aan :-)
14320 ₽ Dambiil "Mucjiso Pink"
Orchids - 10 kumbiyuutarada.
Hal madax leh ayaa kacay - 51 kumbiyuutar.
Buuggan quruxda badan ee ubaxyada, orchids wuxuu u noqon doonaa hadiyad taabasho leh oo jilicsan qof jecel. Samee wax lala yaabo ah oo kululeynaya qalbiga cinwaanka isla markaana ka tagaya xusuusta naftaada weligaa!
7961 ₽ Jacaylka Bouquet